Slimming na Shaping Series Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya - China Slimming And Shaping Series Factory
Ọkachasị ọkachamara furu efu Cyro Fat Ifriizi Ọkụ Na -ere Ọkụ Na -agba Ọkụ 360 Degree Criolipolisis Home Jiri Abụba na -ejigide abụba Cryolipolysis Slimming Machine Spa
Usoro ịchafụ abụba bụ ụzọ a na -ewu ewu. Abụba kefriza slimming adịghị mkpa ịga rie nri. A na -eme ka mkpụrụ ndụ abụba na -agwọ ọrịa kristal (oyi kpọnwụrụ), wee nwụọ. Ka oge na -aga, ahụ gị na -ahazi abụba ma na -ewepụ mkpụrụ ndụ ndị a nwụrụ anwụ, na -ahapụ gị ihe ịchọ mma.
Ọbara na -arụ ọtụtụ ihe na -eme ka abụba na -ajụ abụba na -agbaze abụba na -agbaze okpukpu abụọ nke ibu ibu Cryolipolysis Ifriizi Slimming Machine
Usoro cryolipolysis na -enye nchekwa jụrụ nke ọma ka ejiri nwayọ lebara abụba ahụ anya nke ọma
sel dị n'okpuru anụahụ. A na -eme ka mkpụrụ ndụ abụba na -agwọ ọrịa kristal (oyi kpọnwụrụ), wee nwụọ. N'ime oge ahụ gị n'ụzọ nkịtị
na -ahazi abụba ma na -ewepụ mkpụrụ ndụ ndị a nwụrụ anwụ, na -ahapụ gị ihe ịchọ mma.
Ọkpụkpụ dị jụụ 4 Cryo na -ejikwa Cyolipolysis Slimming Fat Ifriizi Ibelata Ibu
Akara ahụike ghere eghe igwe nwere abụba, igwe na -agbada ọtụtụ ihe 2500W
NBW-VSIII na-ejikọ teknụzụ anọ dị iche iche gụnyere IR (infrared), Bi-Polar RF (ugboro redio), oghere oghere na nhazi anụ ahụ, na-eji oghere pulsed na rollers ịhịa aka n'ahụ. Ngwakọta nke teknụzụ IR na oghere jikọtara ya na -eme ka ikpo ọkụ dị ukwuu na anụ ahụ jikọrọ ọnụ gụnyere septae fibrous, nke n'aka nke ya na -akwalite mmụba na ntinye collagen na metabolism cellular mpaghara, mgbe ahụ na -ebute mbelata mpaghara nke adịghị ike na olu. Ntughari anụ ahụ ọzọ nke Vela na -akpata mmụba ozugbo na mgbasa na ọwa mmiri lymphatic, ihe abụọ dị mkpa maka ọdịdị akpụkpọ ahụ dị mma.
Ụlọ ọrụ na -enye China Amazon kacha ere ere 5 na -ejikwa igwe na -egbu egbu Cryolipolysis 360
Usoro cryolipolysis na -enye nchekwa jụrụ nke ọma ka ejiri nwayọ gbado anya na abụba abụba dị n'okpuru akpụkpọ ahụ. A na -eme ka mkpụrụ ndụ abụba na -agwọ ọrịa kristal (oyi kpọnwụrụ), wee nwụọ. Ka oge na -aga, ahụ gị na -ahazi abụba ma na -ewepụ mkpụrụ ndụ ndị a nwụrụ anwụ, na -ahapụ gị ihe ịchọ mma.
Igwe eji emegharị ihe na -emepụta ihe na -emepụta ihe ọhụrụ, igwe na -ajụ oyi nke anụ ahụ enweghị oke
Ngwaọrụ Ọkachamara V Ọdịdị 3 Syneron V9 Vela RF auto rolle vacuum cavitation abụba mwepụ velashape igwe velashape iii
Ọhụrụ Cryolipolysis Fat Freeze Slimming Machine Onye ọrụ enyi na enyi
akpụkpọ ahụ. A na -eme ka mkpụrụ ndụ abụba na -agwọ ọrịa kristal (oyi kpọnwụrụ), wee nwụọ. Ka oge na -aga, ahụ gị na -ahazi abụba ma wepụ ihe ndị a
Igwe cryolipolysis na -egbu egbu abụba / igwe ihe ọmarịcha slimming mma nwere ọnụ ala
Mma Cellulite 10.4 "igwe na -agbada Cryolipolysis
Kryolipolyse Igwe Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ Kachasịrị ọhụrụ Kwụsịnụ Cryolipolysis Igwe Akụrụngwa Fat
Ọkpụkpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ slimming igwe ibu ahụ slimming cryolipolysis igwe
Mbelata Cellulite Cryolipolysis Slimming Machine 4 na -arụ ọrụ n'otu oge
Vetikal Velashape Slimming Machine Fatịlaịza Lipolysis Weight Loss System
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /10